ICT for Myanmar: 2007
ခုလည်း နှစ်ဟောင်းဖြစ်တော့မယ့် ၂၀၀ရ ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါလေးတွေပြောင်းလဲခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်...
မြန်မာနိူင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး Portal site တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Planet မှာ zawgyi font ကိုုပြောင်းလဲသုံးစွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ.....
မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ Blog တွေအများအပြား ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်....
ဒါကလည်း နာမည်ကြီး Blogger တွေရဲ့ကူညီမှုတွေ အများကြီးရခဲ့လို့ပါ။
၂၀၀ရ ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံး ကျွန်တော် service ပေးရတာကတော့ Virus သတ်ပေးရတဲ့အလုပ်ပါပဲ....
ဒီနှစ်မှာ Virus တွေတော်တော် ပျံ့နှံ့မှုအားကောင်းပါတယ်....
PC တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ နှုန်းလည်းအားကောင်းပါတယ်.....(ဥပမာ..Flashy Virus)
နာမည်ကျော် Antivirus Program တွေတောင် အလူးအလဲခံစားခဲ့ရပါတယ်....
Kaspersky antivirus program ဟာ ၂၀၀ရ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်...
ဒီနှစ်မှာ တွေ့ရတာကတော့ အရင်က Antivirus program ဆိုရင် AVG,Norton ပဲသိခဲ့ကြတဲ့အနေအထားကနေ
bitdefender,kaspersky,f-secure,nod32,mcafee စတဲ့ Antivirus program တွေကိုအသုံးများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်...
Internet ပေါ်မှာသုံးရအလွယ်ကူဆုံး zawgyi font ကို ဒီနှစ်မှာ မြန်မာ Website နဲ့ မြန်မာ Blog တွေမှာအသုံးများလာတာတွေ့ရပါတယ်...
Zawgyi font version3ကိုလည်းဒီနှစ်မှာပဲ upgrade လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်....
တခြား မြန်မာ ယူနီကုတ်တွေလည်း တိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်....
Myanmar NLP အဖွဲ့ကလည်း... Myanmar3 ကို ဒီနှစ်မှာပဲ စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့ Release လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်....
Computer Spare Parts and Related Accessories
ဒီနှစ်မှာ....ကွန်ပြူတာစျေးကွက်ထဲကို...IBMဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့ Monitor တစ်မျိုး ၀င်လာပါတယ်...လုံးဝမကောင်းပါ...
နောက်ပြီး...Powernics ဆိုတဲ့တံဆိပ်နဲ့ Power Supply တစ်မျိုးလဲ ၀င်လာပါသေးတယ်...စျေးနှုန်းကတော့ကောင်းပါတယ်...
ဒီနှစ်ကျွန်တော် Service ပေးရတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ Memory stick,MP3/MP4 player တွေကတော့ထိပ်ဆုံးကနေရာယူပါတယ်...
ဘယ်က စစ်ဆေးလဲတော့မသိပါဘူး..သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီက မစစ်ပါဘူး...
(၂၀၀ရ ခုနှစ်မှာဒါလေးတြွေဖစ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တာပါ...ကျန်ပါသေးတယ်...ပိုစ့်ရှည်မှာစိုးလို့မရေးတော့တာပါ...
The Man and The Apples
A man was going to the house of some rich person. As he went along the road, he sawabox of good apples at the side of the road. He said,” I do not want to eat those apples; for the rich man will give me much food; he will give me very nice food to eat.” Then he took the apples and threw them away into the dust.
He went on and came toariver. The river had become very big; so he could not go over it. He waited for some time; then he said,” I cannot go to the rich man’s house today, for I cannot get over the river.”
( Dear reader " Do not throw good things away; you may be glad to have them at some time.")
Myanmar3Release Version
Hello all of my friends.
We are waiting myanmar3 unicode system foralong time.
Now it can download their website.
But I share it at the following . I got it from saturngod's blog.
Download Myanmar3 unicode system
Test it and enjoy it!!!
About the girls(Not means all)
Her boyfriend walked away in tears and later wrotealetter to her saying.
"Take care my eyes and have fun with those."
This is how humans change when their status changes.Only few remember what life was before and who has always been there in the most painful situations.
(This post is dedicated to one of my beloved friend I call him "small-heart(Athallay)".
Everything keeps changing.The sun tend to rise up in the east so as to set down in the west.The tide must also come out after coming in.Similarly,the sky gets blue and turns orange and occasionally, shows various colors.The spring has come just by now.Trees point out the truth of transition by taking off their old dresses.Before long, they come into leaf and try to cover up their actually innate style.Is it really amazing?In fact, they are going by prearranged series.In summer, they act according to the wish of the summer.In rainy sseason, they stay adaptably with the rainy season.In winter, they are in their consonance with the winter.To put it simply, they practise to conform to the nature of the seasons.These among the unstabalities and unsubstantilities never give up to their lives.They always support and beautify the world in various ways.What about our human beings?How would we stay compatibly with the world that is in changing?Really, we are all travellers.We came to the world foravisit.But when we ask ourselves what the reason for our visit is, little do we realize about that.We came from unknown place and we must also go to unknown place inacertain future.We meet on the world atarendezvous before the end of our destination.Thus, it is reasonable that one must leave behind another after coming together.There isasaying;"To meet is to part". It never ceases to amaze me why people fight each other, even we meet forasplit second. Surely enough,we posses uncertain future respectively.While taking shelter on the world before travelling,we should try to conform to the nature of the summer in the summer,to that of rainy season in the rainy season and to that of the winter in the winter to make good progress on the journey.Time is going by so fast but we are short-lived.This makes us sure that we will part from our beloved world in near future.Why cannot we avoid parting from each other without the will to part?The reason for the question is that we all belong to the nature of transition.Oh, travellers!,however,always opposites in the world.Where there is the bad,there is the good.That is why there must be permanence,if there is unpermanence.May all travellers be able to turn the dream of achieving permanent world into reality.
(This is my last post for my friends. From now on,I can't write posts cause so many situation but I can't explain why.Sorry for that.Goodbye ........)
သူငယ်ချင်းတို့ဒီ blog လေးဆီကိုသွားပြီး
Firstly, you need to aim beyond what you are capable of.You must developacomplete disregard for where your abilities end. Try to do things you are incapable of. Make your vision of where you want to beareality.
REF:It's not how good you are,it's how good you want to be.
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ရကိုရ,ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက် မွေးပြီး ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ တစိုက်မတ်မတ်ကြိုးစားရင် တစ်နေ့မှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပါ။ ကိုယ်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာသိဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ဟာ ကိုယ်တကယ်လိုချင်တာ ဖြစ်ပါစေ။ ရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီး တကယ်ကြိုးစားရင် ရကိုရမှာပါ။
ဘယ်ကစရမလဲ မသိဘူးဆိုပြီးစိတ်မပျက်ပါနဲ့။ တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်မွေးပြီး
အမြဲမျက်စိဖွင့်၊ နားစွင့်ထားရင် အခွင့်အရေးတွေ တွေ့လာမှာပါ။ ရောက်နေတဲ့နေရာကနေသာ စထားပါ။
စမိပြီဆိုတာနဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ ပိုနီးလာပါပြီ။
Portal-electronics ဒီလို ` စ ´ခဲ့တယ်
အချိန်နှင့်နေရာ - ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၊ မှော်ဘီအစိုးရနည်းပညာကောလိပ်
အဓိကဘာသာရပ်နှင့်စာသင်နှစ် - Electronic & Communication Engineering၊ နောက်ဆုံးနှစ်
`ကဲသူငယ်ချင်းတို့ ငါတို့တွေ ဒီတစ်ခါ စာမေးပွဲဖြေပြီးရင် ခွဲကြရတော့မယ် နောက်ဆိုရင်ဒီလို
`ဒါဆို ငါတို့ Address Book လုပ်ကြမယ် လေ။´
`Address Book ကတော့လုပ်မယ် ဒါပေမယ့် ငါတို့ဖြစ်ချင်သလို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်
တွေ့ ဖို့ဆိုတာ မလွယ်သေးဘူး။ ´
`ဒီလိုလေကွာ Address Book ကလိပ်စာတွေအတိုင်း နောင်တစ်ချိန် တို့သူငယ်ချင်းတွေက
`ငါတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို email(gmail) account တစ်ခုစီလုပ်ပေးချင်တယ်ကွာ´
`ဒါဆို ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် online မှာ တွေ့နိုင်တယ်´
`အေးဒါဆို သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက် email (gmail) account တစ်ခုစီလုပ်ပေးပြီး
Address Book မှာထည့်ပေးလို်က်တာပေါ့´
`ငါကတော့ email အပြင် သူငယ်ချင်းတွေ ရေးချင်တာရေးလို့ရနိုင် တဲ့ social network
ဖြစ်ဖြစ်၊ free ရတဲ့ website ဖြစ်ဖြစ်၊ blog ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးချင်သေးတယ်ကွာ´
`အေးလေ လုပ်ကြတာပေါ့ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီလုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ ´
`ကဲအားလုံးလုပ်ထားကြတဲ့ social network တွေ၊ blog တွေက တော့ကောင်းတယ်
ဒါပေမယ့် gmail account ရှိတာနဲ့ သုံးလို့ရတဲ့ blogger ကို သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။´
`Blog ရဲ့ နာမည်ကတော့ Portal-electronics လို့ပေးထားတယ် ´
`ငါကတော့ ကျောင်းပြီးလို့ ရှိရင် သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အလုပ်ခေါ်တဲ့ကြော်ငြာတွေ
`အေးရေးချင်တာရေး ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်တာ တွေကိုတော့ ရေးဖို့ လုံးဝ ခွင့်မပြုဘူးနော် ´
(ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် သြဂုတ် လ ၂၆ ရက်နေ့ က စပြီး Portal-enics မွေးဖွားလာခဲ့တာ ခုဆိုရင်
Address Book လုပ်ဖြစ်အောင်အကြံပေးတိုက်တွန်းပေးခဲ့သော ကိုခြူးမင်း…..
Gmail account တစ်ခုရဖို့ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာ ၉၅ ယောက်သော သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
သူ့ကိုယ်သူ ရီဝေယံလို့ ပြောတတ်တဲ့ ညိုချော
Portal-enics ကို နာမည်ရော Blog ကိုပါဖန်တီးပေးတဲ့ ကျော်လင်း
Portal-enics ဆိုတဲ့ Blog ရယ်၊ enics ဆိုတဲ့ သင်္ကေတလေးပါတဲ့ gmail account ပေါင်းများစွာ
ကို ထင်သလိုလုပ် ခွင့်ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ Hypernet Internet Center ပိုင်ရှင်
သူငယ်ချင်း ညိုချော (ခ) ဇော်မောင်မောင်
လိုချင်တာတွေအားလုံးကို အကောင်အထည်ပေါ်အောင် လုပ်ပေး တဲ့ ရဲဝင်းကျော်
သူတို့အားလုံးကို Portal-enics ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မှာ ဒီ post လေးရေးပြီး
Sparrow ကို မလေးမ က Tag ထားတာကြာပါပြီ.....အလုပ်ရှုပ်နေလို့မရေးဖြစ်တာပါ။
Lenten Memories ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ....
၀ါတွင်းကာလ မှာဗုဒ္ဓဘာသာ တွေရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ရေးထားတာပါ။
ရန်ကုန်မှာ လိုင်းကားခတွေ စျေးတက်ကုန်ပြီလို့သိတာ လေးရက်လောက်တော့ရှိပါပြီ။
ကိုယ်တိုင် မကြုံသေး သဖြင့် သိပ်သတိမထားမိ ၊ ဂရုမစိုက်မိပါ။
မနေ့ကအလုပ်ကိစ္စဖြင့် ပန်းဆိုးတန်းသို့ သွားရသော အခါ ယခင် `၅၀ ကျပ်´ သာပေးရသည့်
ခရီးကို `၁၅၀ ကျပ် ´ပေးလိုက်ရပါသည်။ထိုအခါမှပင် လိုင်းကားခတွေဘာလို့ ဒိလောက်တောင်
စျေးတက်သွားရပါလိမ့်ဆို ပြီး စုံစမ်းမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိူင်ငံတွင်အလွန်ပင်ပေါပါသည်ဟုဆိုသော
ထိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့ သုံးမော်တော်ကားများကြောင့်ပင် ရန်ကုန်နှင့်မှော်ဘီ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်တနေ့လျှင်
`၆၀ ကျပ်´အစား `၃၀၀ကျပ်´ ပေးရသည့်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရပါသည်။
ယခုတဖန်ကျွန်တော့်ထက်ကံဆိုးရှာသော ညီငယ်၊ညီမငယ် များသည် ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်တနေ့လျှင်
`၈၀၀ ကျပ်´ မှ `၁၀၀၀ ကျပ်´ ၀န်းကျင်တွင်ကုန်ကျနေသည်မှာစိတ်မကောင်းစရာပါ။
ထိုမျှလောက်သော ငွေပမာဏ ကို နေ့တိုင်းပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားနေရသောမိဘများအတွက်လည်းရင်မောစရာပါ။
နေ့စားအလုပ်သမားများ နှင့် လခစား အလုပ်သမားများပင်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမား အများစု ၏ဝင်ငွေမှာပျမ်းမျှ တနေ့လျှင် အများဆုံး`၂၀၀၀ ကျပ် ´ ၀န်းကျင်တွင်သာရှိရာ
ဒီလိုပုံစံဖြင့်သာ ဆက်လက်သွားမည်ဆိုှလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတို့၏ဘဝသည်နွမ်းပါးသည်ထက်နွမ်းပါးဖို့သာရှိတော့သည်။
ထို့ကြောင့်ပင် လိုင်းကားခ များကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း ၊ ကုန်စျေးနှုန်းကို တသမတ်
တည်းဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း ၊ အလုပ်သမားများ၏ဝင်ငွေကိုတိုးစေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း
Virus တွေကိုအပြတ်ချေမှုန်းနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လိပ်စာတွေကို
www.mcafee.com or www.softpedia.com
ဒါတွေကတော့ Virus တွေအတွက်နော်..ထိပ်ဆုံးကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
တချို့ program တွေကို free ပေးတယ်။ တချို့ ကိုတော့ ၀ယ်ရလိမ့်မယ်။
Internet သုံးတဲ့သူဆိုတော့ Spyware တွေကလည်း ဒုက္ခပေးတတ်လွန်းလို့
Source:Computer Journal (March 2007/No. 157)
ကျွန်တော်သိသောComputer Virus များအကြောင်း
လွန်ခဲ့သော ၆ လ ခန့်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖွင့်ထားတဲ့
Cyber cafe မှာကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်စုMP3 player
တစ်ခုကနေပါလာတဲ့ virus တစ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
Internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ computer ထဲကိုရောက်သွားတဲ့
အဲဒီ့ virus ဟာ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပညာ
တြွေပလိုက်တာ ဆိုင်ကိုလာတဲ့ customer ကိုတောင်တောင်းပန်
အဆင့်လောက်သာ computer ကိုဒုက္ခပေးနူိင်တဲ့ ထို virus ကို
ရှင်းထုတ်လို့ရသွားပါတယ်။Virus လေးရဲ့နာမည်လေးက တော့
Worm တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ W32 ပါတဲ့လေ။
Virus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Data တွေစုစည်းပြီး Blog ပေါ်တင်မယ်ဆိုပြီး
မေ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူငယ်ချင်းရဲ့ Cyber cafe တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့
ကိုရောက်လို့ သူ့computer ထဲကို antivirus programအသစ် တစ်ခု install လုပ်ပေး
ကဲ…. IT နယ်ပယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့၊ကြုံတွေ့လာနူိင်တဲ့အဖျက် Programတွေ၊
ပုံစံအမျိုးအစား - လည်ပတ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စေ files များကို
ဖြစ်စေ၊system data များကိုဖြစ်စေ ထထကြြွကွမလုပ်နူိင်စေရန်ဖုံးအုပ်
ပေးထားရေးအတွက်တီထွင်ထားသော software တစ်ခုပါ။
အန္တယ်ရာယ်အဆင့် - မြင့်မား
ကြုံတွေ့နူိင်သည့်အနေအထား - အသင့်အတင့်
အဓိကပစ်မှတ် - Windows အသုံးပြုသူများ
ပုံစံအမျိုးအစား - တောင်းဆိုသည့်ပိုက်ဆံမပေးမပေးချင်းမိမိ၏ files များကို
ပြန်ပေးဆွဲထားသကဲ့သို့ data များအားဓားစာခံအဖြစ်ပြုလုပ်ထားနူိင်သည့်
အန္တယ်ရာယ်အဆင့် - အသင့်အတင့်
ကြုံတွေ့နူိင်သည့်အနေအထား - နည်းပါး
ပုံစံအမျိုးအစား - မိမိနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်ဘဏ်တစ်ခုခု သို့မဟုတ်
online auction တစ်ခုခု သို့မဟုတ် shopping site တစ်ခုဖြစ်နေစေမည့် website တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။၎င်းသည်အတုဖြစ်သည်။၎င်းမှမိမိ၏တန်ဖိုးရှိသော
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ data များကိုငါးစာဖြင့်မျှားယူသည့်ပုံစံအတိုင်း လှုံ့ဆော်တောင်းဆိုလာတတ်သည်။
ကြုံတွေ့နူိင်မည့်အနေအထား - မြင့်မား
အဓိကပစ်မှတ် - အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်း
ပုံစံအမျိုးအစား - social engineering ပုံစံတစ်ခုကဲ့သို့ links များ သို့မဟုတ်
တစ်ဦးဦးထံမှ အီးမေးလ်များ သို့မဟုတ် ယုံကြည်လောက်သည့် site တစ်ခု၏အသွင်အပြင် လက္ခဏာမျိုးကိုဖန်တီးထားသည်။အမှန်တကယ်မှာ
၎င်းသည် clone ပြုလုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် supplementary links များ ထည့်ထားခြင်းများ ရှိနေသည်။
ကြုံတွေ့နူိင်သည့်အနေအထား - မြင့်မား
အဓိကပစ်မှတ် - အင်တာနက်အသုံးပြုသူအားလုံး
ပုံစံအမျိုးအစား - သာမန်အားဖြင့် Bluetooth မှတဆင့်တယ်လီဖုန်းများက
တိုက်ခိုက်ယူ၍ရံဖန်ရံခါ SMS မှတဆင့်တိုက်ခိုက်ယူသောအဘိဇ္ဈာ software တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် OS ကိုဖျက်ဆီးမှုပြူတတ်၍ mobile phone များကိုသုံးမရသည့် အခြေအနေ မျိုးအထိဖြစ်သွားစေသည်။
ကြုံတွေ့နူိင်သည့်အနေအထား - အတော်အသင့်
အဓိကပစ်မှတ် - mobile phone အသုံးပြုသူများနှင့် smart phone အသုံးပြုသူများ
ပုံစံအမျိုးအစား - မိမိ computer အတွင်းလျှို့ဝှက်စွာ install လုပ်ယူလိုက်ပြီး
logs လုပ်ယူသည်။ထို့နောက် စာလုံးရိုက်သွင်းပြုစုထားသမျှ အကြောင်းအရာ
အားလုံးကို ဖန်တီးသူထံ ပို့ပေးသည်။အဓိကမှာ မိမိ online banking စနစ်သုံး password များနှင့် credit card ၏အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများကိုရယူ
ပုံစံအမျိုးအစား - Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံမျြှဖင့် spam များ ပွားများလာခြင်း သို့မဟုတ် အင်တာနက် ပေါ်ရှိ computer များ၊ ကွန်ရက်ခိျတ်ဆက်ထား
သော server များအားလုံးကို နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးခြင်း ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုခြင်းများပြုလုပ်နူိင်သော software ဖြစ်သည်။
ကြုံတွေ့နူိင်သောအနေအထား - မြင့်မား
အဓိကပစ်မှတ် - Windows အသုံးပြုသူများအားလုံး
ပုံစံအမျိုးအစား - Domain name system ကိုတိုက်ခိုက်သောအန္တယ်ရာယ်ဖြစ်သည်။မိမိ၏ ISP(internet service provider) သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ server သည် scan website တစ်ခု၏ အသုံးချခံခြင်းဖြစ်သွားစေသည်။
အဓိကပစ်မှတ် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ပုံစံအမျိုးအစား - Passport တွင်ဖြစ်စေ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တွင်ဖြစ်စေ
computer chips အသေးစားလေးများမြှုပ်နှံ၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
ကို သိမ်းဆည်း သိုမှီးထားခိုင်းတတ်သည်ကို ၀င်ရောက်အနှောင့်အယှက်ပေးနူိင်သော software ဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်အဆင့် - အသင့်အတင့်
ပစ်မှတ် - စားသောက်ကုန် ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူများ
ပုံစံအမျိုးအစား - Windows အပြင်အခြား operating system များဖြစ်သော Mac နှင့် Linux ထံသို့ပင်တိုက်ခိုက်လာသော software ဖြစ်သည်။
ကြုံတွေ့နိုင်သောအနေအထား - နည်းပါး
အဓိကပစ်မှတ် - Windows,Mac,Linux အသုံးပြုသူအားလုံး
Soruce:Computer Journal (March 2007)
နှစ်မျိုးစလုံးက ကမ္ဘာကြိီးကိုကောင်းစွာနားလည်စေပြီိး ကမ္ဘာ့အတိတ်သမိုင်းကိုလည်းသိရှိစေသည်။နှစ်မျိုးစလုံးက အဆင့်မြင့်ဝိဇ္ဇာ၊
ကောလိပ်တွင်ဖြစ်စေ၊ တက္ကသိုလ်တွင်ဖြစ်စေ လေးနှစ်ကြာ ပညာသင်ယူမှုပြီးဆုံးသောကျောင်းသားများသည် ဘွဲ့ရရှိကြသည်။
ဤတွင် ကွာခြားချက်တစ်ခုမှာ ကောလိပ်များတွင် မဟာဘွဲ့ အတွက်ဆက်လက်
တက္ကသိုလ်များမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ကောလိပ်များထက် ပိုမိုကြီးမားပြီး ဘဲွ့မျိုးစုံ
ယနေ့ခေတ်မီ တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ အလယ်ခေတ် ဥရောပတက္ကသိုလ်ကြီးများကို
တက္ကသိုလ်ဟူသော အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ university မှာလက်တင်ဘာသာ universitas မှ မွေးစားယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အဓိပ္ပာယ်မှာ `ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်
လူတစ်စု စုရုံးကြခြင်း´ ဖြစ်သည်။
ကောလိပ် college မှာလည်း လက်တင်ဘာသာ collegium မှပင် လာခဲ့သည်။
အင်္ဂလန်တွင် ကောလိပ်များကို ကျောင်းသားများ စာသင်ရန်နှင့်နေထိုင်နူိင်ရန် တည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည်။ကျောင်းသား အုပ်စု တစ်အုပ်စုသည် တူညီသော
အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့် ကောလိပ်အဓိပ္ပာယ်မှာ
အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များသည် သင်ကြားပေးသောဘာသာရပ်များအလိုက် နေရာများခဲွထားပြီး နေရာတစ်ခုစီကို ကောလိပ်ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ယနေ့တိုင် ယင်းကဲ့သို့ခေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးသော
အစီအစဉ်များ၊ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပေးသော နေရာများကို school (ကျောင်း) ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ဥပမာအားဖြင့် တက်ဆန်(အမေရိကန်)တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အာရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်တွင် ကောလိပ်ပေါင်း ၁၈ ခုနှင့် ကျောင်းပေါင်း ၁၀ ကျောင်း ပါ၀င်ဖွဲ့ စည်းထားသည်။
ယင်းတို့တွင် ဆေးဝါးပညာကောလိပ် ၊ ပညာရေးကောလိပ် ၊ အင်ဂျင်နီယာကောလိပ် ၊ ဥပဒေကောလိပ် နှင့်အတူ ဗိသုကာကျောင်း ၊ အကသင်တန်းကျောင်း နှင့်ပြည်သူ့ ရေးရာစီမံခန့်ခဲွမှုကျောင်း တို့ပါ၀င်ကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျှင် ကောလိပ်ဟုသာ
Reference: လင်းရောင်ခြည်USA (2007-1/No.180)
Some happy moments from Hmawbi.
The Meaningful Signs
Google Talk နဲ့ Chatting လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
Gtalk နဲ့ Gmail မှာ အသုံးများတဲ့ Chatting Signs တွေကိုတတ်နူိင်သလောက်စုစည်းပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်To get this!.............................. Type this
1. wink ………………………….......... ;)
2. straight face………………………… :-l
3. big smile ………………………….... =)
4. nose grin …………………………. :-D
5. big nose wink……………………… ;^)
6. nose wink ………………………… ;-)
7. nose smile ………………………… :-)
8. skeptical ………………………...... :-/
9. sticking tongue out………………. :P
10. heart ……………………….......... <3
11. monkey ………………………..... :(l)
12. rock out! ………………………… \_m/
13. shocked ………………………… :-o
14. grin …………………………...... ;D
15. frown ………………………….... :(
16. angry ………………………….... x-(
17. cool …………………………….... B-)
18. crying ……………………………. :’(
19. big grin …………………………… =D
ဒီ Sign လေးတွေဟာ Gtalk နဲ့ Gmail မှာတင် သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။
Other Instant Messaging program တွေနဲ့ Chat room တွေမှာပါ သုံးလို့ရပါတယ်။
Moblie phone နဲ့ Message ပို့ရင်လည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
တခြား အသုံးများတဲ့ Sign တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
နောက်များမှာ စိတ်ပါရင် ဖော်ပြပေးသွားပါအုံးမယ်။
(Please: ဒီ Signs လေးတွေထဲမှာ မှားနေတာလေးတွေရှိရင်သိတဲ့သူကပြင်ပေးပါနော်။)
I don't want to say....but.....
(`နေပြည်တော််´ပြောင်းရတဲ့ ရုံး၊ဌာန တွေထဲမှာဆက်သွယ်ရေးရုံး
ကံကောင်းတာပေါ့ဗျာ…မဟုတ်ရင် `၃၀၀၀´ နဲ့မပြီးပဲ `၃၀၀၀၀´ နဲ့
Studying Aboard for Myanmar Student(That's what I want to say)
You will face the environment changes (culture shot- eg. living together, black & white).
Whatever doing, you should achieve your goals.
You should do survives yourself.
You miss->you miss.
You fill->you fill.
If you have accident, use your health insurance card.
Take care your health before you go to aboard especially in infection diseases.
Take care subject especially in Law.
Don't shy & depression.
When you studying aboard, the English (IELTS 6+) is essential and use everyday to go library and be practical.
The attendance must have at least 80%, if you don't have it that not permit visa.
You not get PR. First, you must get job.
There are4billions people in S'pore, why are you going there???
There may be getting in overloads workers.
When you finished your school at S'pore, it is you get the diploma,not the degree.
Don't believe the private school in S'pore, they can't make youaqualified student.
For example. to join another University for future studying.
*source: ကိုပြူးနှင့်မပြုံး (ကာတွန်းဝိဇ္ဇာဦးဘဂျမ်း)
They R AWAY.....I'm Not AWAY......Why????
Tuesday,May/ 8 /2007, 9:22 PM(Last posted 9:25PM Tuesday,May/8/2007)
Myanmar people r away from mm...I try to find out their intention and listed as below...
They r now in...
1.Russian Federation____only for study..... Most r sent by the government to study science and technology of RU...They r sent to study for the advanced technology for our country ( I think)...my fris,pls try very,very hard for our country...As i've no chance like u, i'll be waiting for the days u'll come back n change in various sectors of mm....
2.Singapore____both for learning and working.......Salary is better than here n education is also good...It is alsoanice transition for europe...
3.Korea ____only for work....They r very tired in there because of work and weather condition....
4.Malaysia____either for work or study.....Most r there for work....For study is rare...
5.Thailand ____either for study or work...
Moreover some of my friends are at UK and USA for studying and one of my friend is working at maccao,Hongkong.
Is there any reason for "they r away from mm"...Yes,there is....But no need to tell me....i know it....Pls keep it in ur heart...
And what about ladyfiger?Ladyfinger is not away from mm...ladyfinger live in ygn,mm....WHY???? Ladyfinger can't live inaplace where there is no "tin tin aye monthinkhar, fatty ma kaut nyin htouk from china town, sticky rice,mont bine taunt,bain mont,mont pyar tha lat,hten thee mont,mont sein paung,si hta min,......." I can't live without having mm traditional food.....And then I can't stay other country because I can't goodbye with my family especially my mother. She will be lonely if I go to other country and I worry for my mother's health from other country.I don't like this feeling so I can't live away from myanmar.And then so many want to tell................................
Good luck in ur place....
To know all of my friend.
All of my friend,there is one thing to tell you about the journal opportunity.
From now on,all of us can read this journal at online.
So,we don't need to buy journal opportunity for search jobs.
This journal website is www.journalopportunity.com.
But I madealink for this journal on our blogsite so you can see.
To apply foregin country universty.
The above website links are very useful to know about how to apply and how to complete forms at online.
Preapre the following to get your cofidence (Part 2).
B)At the Interview................
1) Stand right in front of the table.Do not touch the table.
2)Do not sit down without being asked by the interviewer,and thank him or her when you are asked to takeaseat.
3)Sit upright, but not stiffly with your arms folded over defensively.
4)Avoid slouching or lots of nervous movement and smiles.
5)Don't giggle or grain at the interviewers.
6)Good deep breaths tend to help u regain your presence of mind.
7) Don't fidget , light upacigarette or chew gum.Avoid off-putting manner.
8)Don't interrupt the interviewer .Look at the person who is speaking to u and show interest in what she is saying.
9)Takeamoment to think about the answer to the questions. Listen carefully, speak carefully and do not rush.
10) Be natural and honest.Be positive and concentrate on achievements and experience.Don't make false claims.Don't answer just 'yes" or 'no'.
11)Support your answer with egs and give reasons for your opinions. At the same time stick to the point and remember that the interviewer's time is limited.
12)Be claim and straight forward with the interviewer's aggressive
Preapre the following to get your cofidence (Part 1).
For Interview (Candidates)
1.Before the interview....................
a).Try to find out something about the company and about your actualduties.
b )Prepareafolder or file containg your application letter ,biodata and supporting certificate, documents etc.
c)Try to wearsomething tidy and comfortable.
d)Arrange transportation before handand try to reach the place and interview in good time.
e)To haveconfidence ,bear in mind that you are looking forajob ,and theemployer is looking forajob,and the employer is looking for someoneto fillavacancy.
f)neither of you is doing the otherafavour.
Hello friends of GTC ,
I am really so wonderful when I heard about the exam result.I think you all will be very happy like me.
By the way , I do remind all of my friends to use the G-mail accounts and also respond to me and enics environment. If there isafriend who does not have the familarities with the internet , please help him or her on behalf of our enics environment.
your friend kyaw zaw